Nyi Nyi Naing၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဘလော့များ (22)ဆွေးနွေးချက်များ (62)အဖွဲ့များ (4)ဓါတ်ပုံများ (15)Photo Albumsဗွီဒီယိုများ Nyi Nyi Naing's Likes Nyi Nyi Naing's ၏မိတ်ဆွေများ
အားလုံးကြည့်ရန်... Nyi Nyi Naing's Groups
Nyi Nyi Naing's Discussions
Started this discussion. Last reply by သန္ဒာလင်း Dec 1, 2012. 14 Replies
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ညီအကိုမောင်နှစ်မများ အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ သာသနာပြုခြင်းနဲ.ပါက်သက်ပြီး မိမိတို.ရဲ.အတွေးအမြင်များကိုဒီနေရာလေးမှာ မျှဝေဆွေးနွေးရအောင်လားခင်ဗျာ။သာသနာပြုတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလဲ၊…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(အတွေးအမြင်) အမျှဝေ၊သာဓုခေါ်...
Started this discussion. Last reply by နီစံ (အနီ) Jul 2, 2011. 8 Replies
ကျွန်တော်တို.ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာနေ.စဉ်ဘုရားရှိခိုးပြီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကုသိုလ်ကောင်းမှူတစ်ခုခု လုပ်ပြီးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အမျှပေးဝေကြပါတယ်၊ပြီးရင်သာဓုခေါ်ကြပါတယ်။အဲဒီလို အမျှဝေနေတဲ.အချိန်မှာ စိတ်ကိုဘယ်လို…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်၏ရည်မှန်းချက်
Started this discussion. Last reply by ကျော်ကို Dec 14, 2011. 27 Replies
သင်ဟာထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဘုရားပွဲ
Started this discussion. Last reply by ကျော်ကို Dec 17, 2011. 19 Replies
ဘုရားစေတီတော်ကြီးတော်တော်များများမှာ ဘုရားပွဲ ဆိုပြီးလူတွေ လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတာကို သီလ၊သမာဓိ ပညာ ကြီးမားတဲ.ဆရာတော်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင် ကန်.ကွက်ခဲ.ပါလျက်နဲ. ယခုထိတိုင်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... အားလုံးကြည့်ရန်...
Nyi Nyi Naing သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
Nyi Nyi Naing၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
Nyi Nyi Naing commented on ♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫'s blog post 'စွန်းလွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ အမေး ၊ အဖြေ များ (၂ )'"THANK YOU SO MUCH!"May 8Nyi Nyi Naing shared ♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫'s blog post on Facebookစွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမေး ၊ အဖြေ များ (၁)May 6Nyi Nyi Naing commented on ♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫'s blog post 'စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမေး ၊ အဖြေ များ (၁)'"Thank you so much!"May 6Nyi Nyi Naing shared ♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫'s blog post on Facebookစွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမေး ၊ အဖြေ များ (၁)May 6Nyi Nyi Naing shared ♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫'s blog post on Facebookစွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အမေး ၊ အဖြေ များ (၁)May 6Nyi Nyi Naing shared thein wai's blog post on Facebookသာသနာပြုခြင်းနှင့် လွဲမှားနေကြသူများ။Apr 28Nyi Nyi Naing liked thein wai's blog post 'သာသနာပြုခြင်းနှင့် လွဲမှားနေကြသူများ။'Apr 28Nyi Nyi Naing commented on whitecolor's blog post 'ခန္ဓာ (၂) မျိုး ရှင်းတမ်း (အပိုင်း-၂)'"Thank you so much!"Apr 27Nyi Nyi Naing liked whitecolor's blog post 'ခန္ဓာ (၂) မျိုး ရှင်းတမ်း (အပိုင်း-၂)'Apr 27Nyi Nyi Naing liked whitecolor's blog post 'ခန္ဓာ (၂) မျိုး ရှင်းတမ်း (အပိုင်း-၁)'Apr 27Nyi Nyi Naing leftacomment for dimplemit"Dimplemit ရေ ဖိတ်စာပို.ပေးထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။အဝေးရောက်နေလို. ခုမှဖတ်မိပါတယ်။အလှူဖြစ်မြောက်အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက် သာဓု သာဓု သာဓု ပါ။ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ ။"Apr 26Nyi Nyi Naing postedastatus"ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ တရားဓမ္မသည် အမှန်အတိုင်းထုတ်ဖေါ်ဟောကြားအပ်သည့် “သွာက္ခာတ” ဂုဏ်နှင့်ပြည်.စုံ၏။
မှန်ကန်စွာဟောထားသည်ကို ဟောထားသည့်အတိုင်း လက်တွေ.ကျင"Apr 26 0
Nyi Nyi Naing and အရှင်အာစိဏ္ဏ are now friendsApr 26Nyi Nyi Naing commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'အဘိဓမ္မာဟာ Analyst လုပ်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုပဲ'"Thank you so much!"Apr 26Nyi Nyi Naing liked မူကြိုဆရာ's blog post 'အဘိဓမ္မာဟာ Analyst လုပ်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုပဲ'Apr 26dimplemit leftacomment for Nyi Nyi Naing"ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977"Apr9More... RSS
Nyi Nyi Naing's ၏ဓါတ်ပုံများ
Nyi Nyi Naing's Blog
လမ်းစဉ် နှင့် ပန်းတိုင်
ဒီဘလော့ကို February 21, 2013 တွင်11:07am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
၀ိပဿနာ၏ပန်းတိုင်သည် သစ္စာ(၄)ပါးဖြစ်သည်။သစ္စာ(၄)ပါးတွင်လည်း အဓိကသည် နိရောဓသစ္စာ(နိဗ္ဗာန်)ဖြစ်၏။နိရောဓသစ္စာကို ဓမ္မစကြာတွင် တဏှာချုပ်ရာဟုဘုရားရှင်ကဟောကြားတော်မှုသည်။တဏှာသည် ကိလေသ၀ဋ်တွင်ရှိသည်။တဏှာ၊ဥပါဒါန်ဖြစ်သော ကိလေသ၀ဋ်သည် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တွင်ပါဝင်၏။ပဋိစ္စသမုပါဒ်ကိုနားလည်ရန် အကြောင်းအကျိုးကို အနတ္တဥာဏ်ဖြင့်သိမြင်ရမည်။အနတ္တဥာဏ်ရရန် ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဥာဏ်ကို အားထုတ်ရပေ သည်။ဤသို.ဆိုလျှင် နာမရူပပရိစ္ဆေဒဥာဏ်သည် နာမ်ရုပ် ပိုင်းခြားသိခြင်းဖြစ်၍ ၄င်းနာမ်ရုပ်ပေါ်တွင် အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တ လက္ခဏာဝင်ကာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... လက္ခဏာ၊ရသ၊ပစ္စုပဋ္ဌာန်၊ပဒဋ္ဌာန်....
ဒီဘလော့ကို August 24, 2012 တွင်12:11pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
ပရမတ်တရားတွေကို လေ.လာတဲ.အခါမှာ လက္ခဏာအားဖြင်.သိဖို.လိုသလို ရသ၊ပစ္စုပဋ္ဌာန်၊ပဒဋ္ဌာန် အားဖြင်.လည်းနားလည်ဖို.လိုပါတယ်။စိတ်ဆိုလည်း
ဒီလေးမျိုးနဲ.ခွဲခြားသိပြီး ဖဿ၊ဝေဒနာ၊လောဘ၊ဒေါသ ဆိုတဲ။စေတသိက်တွေကိုလည်း ဒီလေးမျိုးနဲ.နားလည်မှ သူတို.ရဲ.သဘာဝကို သေသေချာချာသဘော
ပေါက်သွားမှာပါ။လက္ခဏာဆိုတာမြန်မာလိုအမှတ်အသား Individualessence,Character,Nature ဒီအမှတ်အသားကိုကြည်.ပြီး ဒါဘယ်လိုမျိုးးလဲ၊ဘယ်နေရာ
လဲလို.သိနိုင်ပါတယ်။နားလည်အောင်ပြောရရင် လမ်းမှာစိုက်ထားတဲ. Road Sign တွေလိုပေါ.။ဒီအမှတ်အသားကိုကြည်.ရင်… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... သညာ နှင်. ပညာ
ဒီဘလော့ကို August 20, 2012 တွင်6:02pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
စိတ်ဆိုသည်ကားသိမှုသာတည်း။ရှေ.ရှုမိသောအာရုံကို ထင်မြင်အောင်ပြုမှုသာတည်း။သိပြီးသားတွေဖြစ်နေသမျှသည် သညာ၏
စိတ်မမှီနိုင်သော သဘောအချက်ကို ပြပေးနိုင်သည်ကား ပညာပေတည်း။ပညာပြတိုင်း သညာကမှတ်၏။ပညာသည်လည်း မှတ်သ
စိတ်ပြတိုင်း အဟုတ်မှတ်၏။ပညာကား… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... သတ္တိ ရှိဖို.လိုပါလိမ်.မယ်...
ဒီဘလော့ကို August 20, 2012 တွင်5:56pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments
“သတိ” ရယ် “ဥာဏ်ပညာ”
နန္ဒာသိန်းဇံ(အနေခက်အောင်ကူညီကြသူများ မှ) ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
အားလုံးကြည့်ရန်... Comment Wall (39 comments)
9:47am အချိန်April 9, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနဟိတအသင်း၏ (၅)ကြိမ်မြောက် အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977 1:10pm အချိန်February 12, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:293069 3:11am အချိန်August 16, 2012, တွင်အရှင်အာစိဏ္ဏ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လေ့လာသွားပါတယ် 4:35am အချိန်January 3, 2012, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အကိုညီေ၇ မင်္ဂလာပါနော် ညီမ လာလည်ပါတယ် http://buddhismworld.ning.com/group/admingroup လာခဲ့ပါအုံးနော် အကို။
ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေ။ 6:51pm အချိန်December 27, 2011, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ Friends18.com Beautiful Scraps
Friends18.com Water Effect Scraps 9:44am အချိန်December 9, 2011, တွင်ကောင်းမြတ်မင်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ.....မွေးနေ့ဆုတောင်းနောက်ကြခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်..ယနေ့မှစပြီးနှစ်ပေါင်းများစွားတိုင် (သာသနာအကျိုး၊လူမျိုးအကျိုး၊ကိုယ်ပိုင်ဘ၀အကျိုး)များကိုကိုသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။ 10:48pm အချိန်November 23, 2011, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကိုညီညီရေ ညီမ လာလည်ပါတယ်။ လက်ဆောင်အဖြစ် အကြံတွေ သယ်လာပါတယ်:)
ကိုညီပြောတဲ့ သာသနာပြုသည် ဆိုသည်မှာ ...ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးမှု forum တခု ထည့်ကြမလား အဲလိုထည့်ချင်ရင် ဆွေးနွေးချက်ထည့်ရန် ဆိုတဲ့ နေ၇ာကနေပြီး ကိုညီကနေပြီးတော့ စတင်ပေးပါ ကိုညီ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုညီရဲ့ အသိတွေကို ဘလော့တခုအနေနဲ့ရေးပြီး တင်ပေးမယ်ဆိုရင်လဲ မဆိုးဘူး...ကိုညီအဆင်ပြေသလို အားသန်သလိုသာ လုပ်ပါ။
ပျော်ရွှင်ပါစေ။ 11:17pm အချိန်November 9, 2011, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ Friends18.com Miscellaneous Scraps
Friends18.com Top Rated Scraps 7:06pm အချိန်November 2, 2011, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ Friends18.com Enjoy Scraps
Friends18.com Enjoy Scraps 7:48pm အချိန်October 31, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလည်ပါတယ် . ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေရှင်... မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
ဦးအောင်ကိုး ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
Top News · Everything ဦးအောင်ကိုး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ'"လူ့ လောကထဲမှာ တော့ ဘာကာမဂုဏ်ချမ်းသာမှ ချမ်းသာအစစ်မဟုတ်တကယ်ချမ်းသာမရှိလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါသည်."3 minutes agoမူကြိုဆရာ posted blog posts“… ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ …”အနာထပိဏ် နဲ့ ၀ိသာခါ…ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်3 more…42 minutes agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ2 hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ'2 hours agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ2 hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ'2 hours agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်တို့က ကိလေသာတို့ကို မပယ်နိုင်ဘူးလား2 hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်တို့က ကိလေသာတို့ကို မပယ်နိုင်ဘူးလား'2 hours agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookမေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်3း hours agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း'3 hours agoThaung Tan liked whitecolor's blog post 'တကယ့် ဥပေက္ခာဆိုတာ'3 hours agoThaung Tan liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် မင်းကိုဘေးဖယ်'3 hours ago More... RSS